Lalaon’ny CJSOI : haka endrika seho goavana ny fanokafana | NewsMada
Lalaon’ny CJSOI : haka endrika seho goavana ny fanokafana
Tonga ny fotoana! Efa vory lanona eto Antananarivo avokoa ireo mpandray anjara rehetra amin’ny “Lalaon’ny kaomisiona ho an’ny tanora sy ny fanatanjahantena aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina”. Hisokatra, anio tolakandro, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina ny andiany faha-10 amin’ny lalaon’ny CJSOI, izay ampiantranoan’i Madagasikara, mazava loatra.
Araka ny fanazavana, haka endrika seho goavana sy maimaimpoana ny lanonam-panokafana, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Hisy ny filaharana hampahafantarana ireo mpilalao hifanandrina rehetra mandritra ny lalao. Hanaraka avy eo ny mitabe. Hanafana ny sehatra goavana kosa ry Jerry Marcoss, Melky, Odiay, Simonda ary Stanros. Ireto farany rahateo no nanatontosa ilay hira fanevan’ny “lalaon’ny CJSOI” andiany faha-10.
Mikasika ilay lafiny zavakanto sy kolontsaina izay ihany, hisy ny fanehoana ny dihy sy mozika nentim-paharazana, hataon’ny sampana zavakanto eny amin’ny A&C Ivato, ny alahady 31 jolay. Hitohy amin’ny fihaonamben’ny tanora izay ny alatsinainy maraina, eny an-toerana ihany. Etsy amin’ny CEMDLAC Analakely kosa ny sokajy dihy, mozika ary teatra ny hariva. Hitohy ao amin’ity toerana ity ihany ny teatra ny talata 2 jolay. Miverina ao ihany koa ny dihy sy mozika nentim-paharazana ny 4 aogositra.
Raha tsiahivina, mihodidina ny tontolon’ny tanora ny lohahevitra voizina anatin’ny teatra sy ny dihy. Soradihy roa no homanin’ireo tanora solontena malagasy. Manomana piesy teatraly roa koa ireo mpanao teatra, ka “Code des jeunes” sy “L’Union fait la force” ny lohateniny.